EyeThupha 6, 2018 admin
amaqabane karhulumente Indian ne Mahindra zeakhawunti. ukwakha “yesithili blockchain”
urhulumente State in India isebenza kunye neenkonzo IT beentlanga elikhulu ukwakha wesithili inhloko i ezinikele blockchain zokuqala. Isebe zeIT ತುಳಿಲು molweni karhulumente karhulumente esebenza Tech Mahindra, inkampani kuluhlu esidlangalaleni nekomkhulu in India, leyo aya kubona izinto ezimbini uphelekwe ukwakha oko bathi baya kuba lizwe kuqala “yesithili blockchain.”
Ii-ofisi zezithili blockchain neyendlu indawo ngaphakathi Hyderabad - isixeko capital karhulumente - kunye nezakhiwo emzimbeni ngendlu ifukama zokuqala blockchain ukusuka eIndiya njengenxalenye push karhulumente phambili uphuhliso zobuchwepheshe xa. zombini ತುಳಿಲು molweni & ilizwana elikufuphi Andhra Pradesh sisajongisisa blockchain iteknoloji kwakhona ngokwamanani obhaliso zabo umhlaba & kutshanje baye baqala ukuphuhlisa eziphilayo blockchain.
52 Quintillion ngomzuzwana: hashrate Bitcoin ephula irekhodi entsha
Bitcoin kaThixo hashrate yenethiwekhi yafikelela aphezulu kule veki entsha, wawu ekhuthazwa abahlalutyi shishino nenkxaso technical gqolo ukukhula sande. Idatha evela Blockchain (owayekade Blockchain.info) engqina ukuba hashrate ngoku sele sifikelele 52 quintillion hashes ngomzuzwana.
Njengendlela yokuthelekisa, inani nanjengentlabathi eselunxwemeni Earth ngeenxa 7 quintillion. I Blockchain data iqinisekisa ukuba 60% ukwanda kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo kuphela. Oku kuphawula ixesha lokuqala Bitcoin sele ufikelele kweli embundwini kwimbali yawo.
iibhanki ZaseThailand ngoku nkampani evulekileyo ukutyala cryptocurrencies
I-Bank of Thailand (Bot), kwibhanki zeli lizwe, kuthiwa wamnika yonke yasekuhlaleni amaziko ezemali imvume ukuqalisa nkampani ukuba imali cryptocurrencies ukuba nazo zinika iinkonzo labarhwebi abasebenza crypto. iibhanki Thailand ngoku uya kuba nako ukunika iinkonzo labarhwebi kwiinkampani ezinxulumene-crypto, imali crypto kunye blockchain zokuqala, okanye asebenzise siqu yabo crypto, ngokutsho isaziso yakutshanje yi-Bot.
Kunjalo iibhanki zasekuhlaleni kunye nkampani zabo mvume nazo abavumelekanga ukuba athenge, athengise, okanye urhwebo cryptocurrencies egameni abathengi. kwakhona, iibhanki ZaseThailand ukuze isebenze kuphela mveliso crypto kulawulwa yi Commission Securities and Exchange yelizwe (Sec ZaseThailand) kunye ne-Ofisi yeKomishoni Insurance (OIC). Kuyaphawuleka, ukutshintshiselana ezizimeleyo yedijithali lwangoku kujongwe ngokusemthethweni Thailand emva kokugqiba inkqubo yokubhalisa. Ngokusekelwe kwezi nguqu, kubonakala abasemagunyeni Thailand basabela emarikeni cryptocurrency ivela njenge.
Yesibini ngobukhulu exchange stock German yazisa "lokuphela-to-ekupheleni 'iziseko cryptocurrency
Emva kokudala app inyathi crypto-urhwebo, istock exchange yesibini ngobukhulu eJamani usaqhubeka kukwamkela cryptocurrency kunye iphulo layo lwakutshanje. Boerse Stuttgart idala indawo yokurhweba, nokugcinwa, ngokuba cryptocurrencies kunye neenkonzo ezinxulumene & ngokusemthethweni wamemezela "Boerse Stuttgart Group lubangela isiphelo-to-ekupheleni iziseko asethi digital. Emva kokuqalisa borhwebo cryptocurrency nge bison, kungekudala kuza kubakho… indawo yorhwebo amaninzi ngenxa cryptocurrencies kwakunye izisombululo sukugcina.”
Inyathi app ngenxa ukuba ukusungulwa kwalo ekwindla uya kube lula ukufikelela kwiimarike ze uvumele simahla nekhuselekileyo zokurhweba of cryptocurrencies, uyenze le app yokuqala ehlabathini ukuba exhaswa yi-stock exchange yemveli. ekuqaleni, le app iya kuxhasa BTC, LTC & abanye. Indawo yorhwebo-asethi edijithali ezifana BTC ziza kuquka nomba isiphelo-to-ekupheleni lwezibonelelo. CEO of Boerse Stuttgart GmbH, Alexander Höptner wathi: "Siwamkela ukuba yenziwe zombini ngemiyinge kwamaziko abatyali imeko elawulwayo kwaye zithembeke ukuba ekurhwebeni cryptocurrencies.” Iinkonzo lokugcina akhulise abantwana uza ziquka ingafani iingqiqo zokhuseleko asethi yedijithali kwaye sele kufumaneka kunye nosungulo inyathi app trading.
Iimpazamo of Сrypto bezimali. Er...
UKUCHITHA: Constantinople has b...
BULLISH CRYPTO NEWS! umthambo, Bra...
Post Next:Blockchain News 07.08.2018